Ezona fonti ezincinci | Abadali be-Intanethi
Iifonti ezingcono kakhulu ezincinci
Iris Gamen | | Ukuphefumlelwa
Ukusetyenziswa kochwethezo akukaze kuthathwe kuyilo njengento engafanelekanga, ngokuchaseneyo. Ukhetho lokuchwetheza, iifom zayo, ukubunjwa kwayo, zine impembelelo enkulu ebonakalayo xa usungula umyalezo eluntwini. Yiyo loo nto namhlanje uyilo lokuchwetheza bubugcisa obuxatyiswe kakhulu emva kokuba kukho imbali ende.
Namhlanje siza kuqala ngokuphonononga ibali elisemva kwalo, ngokufutshane, kwaye sikunika ukhetho lwe iifonti ezincinci ayinakuphoswa kwikhathalogu yakho yeembekiselo zokuchwetheza.
Ukuqonda into ejikeleze imbali ye-typography kufuneka sibuyele kwimvelaphi yokubhala kwixesha ledijithali esizifumana namhlanje.
1 Ukuqala kohambo: imbali ye-typography
2 Uhlobo lohlobo
2.1 i-serif typography
2.2 Sans serif okanye sans serif typeface
2.3 Iscript okanye iifonti zesandla
2.4 iintlobo zokuhombisa
3 Iifonti ezingcono kakhulu ezincinci
3.3 Agatha ukuhambelana namazwi
3.6 YENZA LULA
Ukuqala kohambo: imbali ye-typography
Kufuneka sibuyele kwinkulungwane yesibini BC ukuya eMesopotamiya, apho abakroli basebenzisa amanqindi kunye nokufa ukukrola iimilo zoonobumba kunye neeglyphs. Iileta zakudala zamaRoma ezazisetyenziswa kwizakhiwo zisebenze njengenkuthazo kuninzi lweentsapho zohlobo lweserif esizaziyo namhlanje, njengeTimes New Roman edumileyo.
Siqhubela phambili ngexesha, kwaye sikwinkulungwane yeshumi elinesibini eYurophu, apho sifumana khona iileta zokuqala ezibhalwe ngesandla ezenziwe ziimonki zemibhalo-ngqangi ekhanyayo apho kwakunokubonwa oonobumba abahonjisiweyo. Obu buchwephesha baziwa namhlanje njengeGothic calligraphy, kwaye ibiyiyo kwaye bubuchule bokubhala ngesandla obunamandla.
Imbali yokuchwetheza njengoko sisazi namhlanje inemvelaphi yayo ukuveliswa komatshini wokushicilela owawenziwe nguJohannes Gutenberg ngonyaka we-1440, eyenziwe eJamani. Yayibunjwa ngumatshini owawunokwenza izimbo zokubumba ukuze kushicilelwe oonobumba kamva. Oku kuyilwa kwenza kwaba nokwenzeka ukuba kushicilelwe iBhayibhile enemigca engama-42.
Ngombulelo kwimpumelelo yoyilo, ushicilelo lohlobo olushukumayo lwafikelela kulo lonke elaseYurophu kwaye kunye noyilo lwayo lwagqibelela kwaye lwavumela. vula iivenkile zoshicilelo kwilizwekazi lonke.
Imisebenzi ebaluleke kakhulu inikwe kwinkulungwane yeshumi elinesibhozo, apho i-typography iqala ukuvela kunye nokuphuculwa kweentlobo ze-cast cast, umphezulu apho bebesebenza khona kunye nomgangatho ophezulu wee-inki, konke oku kwakuthetha utshintsho kwihlabathi lobugcisa begraphic.
Ngexesha le-XNUMXth inkulungwane, inkqubela phambili yetekhnoloji iye yachaphazela ngqo i-typography, kwaye isiganeko esasinempembelelo enkulu yayiyinkangeleko yeekhompyutha. Ukususela ngalo mzuzu, Iinkqubo zolwazi zincede abaqulunqi baqonde kwaye benze iintsapho ezichwethezayo.
Njengoko sisazi, i-typography iqondwa njenge isethi yemiqondiso eyilwe ngesimbo somzobo esifanayo.
Iifonti zinokuhlelwa ngeendlela ezahlukeneyo, kule meko siza kuyenza ngokwe-anatomy yazo, ngoko ke iibhloko ezine ziyahlulwa.
Owona mahluko uphawuleka kakhulu kweli qela ukusetyenziswa kweserif kubalinganiswa babo, kokubini esisekweni sayo nangaphezulu. Imvelaphi yayo ivela kwinqanaba lemizobo yokuqala yamatye.
Sans serif okanye sans serif typeface
Iintlobo zochwethezo kweli qela azinazo ii-serif, zazo imivumbo iyafana kwaye iimpawu zabo zithe tye. Ixesha lokuqala olu hlobo lwe-typography lubonwa ngexesha le-industrial revolution kwiipowusta.
Iscript okanye iifonti zesandla
Eyaziwa ngokuba ziifonti zezandla, ukusukela oko zama ukulinganisa ukubhala ngesandla. Iileta zabo zidla ngokuhonjiswa.
Kweli qela siya kufumana uhlobo lochwethezo oluye lwenziwa yenzelwe iinjongo zokuhombisa.
Nje ukuba siyazi imbali ye-typography kunye nokuhlelwa kwayo, ngoko siza kukushiya uluhlu lwe ezona fonti zincinci zibalaseleyo zoyilo lwakho.
I-typography ekhethiweyo kufuneka ihambelane ne-brand esisebenza ngayo kunye nefilosofi yayo, ngale ndlela iya kuhambisa umyalezo ngokuchanekileyo kwaye ifikelele kubaphulaphuli abaninzi.
I-Minimalist typography, kakhulu ilula kodwa inesitayile esihle kakhulu. I-Gaoel yifonti ye-sans serif apho unokufumana khona ngaphandle kwamanani kunye namanqaku obhalo, ii-accents zeelwimi ezahlukeneyo. I-drawback kuphela yolu chwethezo kukuba kukho oonobumba abakhulu kuphela.
Ubuncinci kunye nefonti elula kwiiprojekthi zakho. Yi typography yanamhlanje apho unokufumana khona zombini ngqindilili kunye nesiqhelo, amanani, amanqaku eziphumlisi, ezinye iileta kunye kananjalo, oonobumba abakhulu beelwimi ezininzi.
Agatha ukuhambelana namazwi
Ubume bokuchwetheza obuncinci akufuneki bube yi-sans-serif kuphela, kulo mzekelo sibonisa i-Agatha typeface, eluhlobo lwe isimbo esibhalwe ngesandla, o.k.t. ukulinganisa ukubhala ngesandla. Isinika oonobumba abakhulu nabancinci, amanani kunye neziphumlisi.
Yakhiwe ngokusebenzisa amanani ejometri, u-Beckman uba uchwethezo lwangoku nolunamandla. Inqaku elincomekayo lolu hlobo lochwethezo kukuba lisinika iintsimbi ezintandathu ezahlukeneyo, kwelinye icala, into embi kukuba kukho oonobumba abakhulu kuphela kunye neendidi ezincinci zamanqaku eziphumlisi.
sinibonisa enye i-italic minimalist yokuchwetheza oko kuya kunika uyilo lwakho isimbo esihle kunye nesetyhini.
Uchwethezo lweqela le-sans serif. Yi ifonti ecudisiweyo kodwa enobubanzi bomgca onceda ukufundeka.
Ukuba into oyikhangelayo sisitayile sejiyometri, nantsi iPrime font. Uchwethezo olwenziwe ngokwejometri enexabiso eliphezulu lokufundeka kwiipesos zayo ezimbini; ukukhanya kunye rhoqo.
Sans serif ifonti ukuba xuba ubuhle kunye nolula. Yifonti efanelekileyo kwizihloko, iiheda, amanqaku asezantsi, njl. Isibonisa ubunzima obuthathu befonti: ukukhanya, rhoqo kunye nesibindi. Ukongeza, abalinganiswa ababini, unobumba ophezulu nasezantsi, iimpawu zobhalo, amanani kunye nezigxivizo.
Ubuhle be semi-serif typeface. Ibonelela ngoonobumba abakhulu kuphela. Njengenqaku elilandulayo siyakuthi alinamagama anoonobumba abancinane.
Omnye ifonti epheleleyo kakhulu, ekubeni, isinika iipeso ezine; ukukhanya, umthunzi, kabini kunye nesibindi.
Ubume bohlobo obuCondensed Sans Serif. I-Kelson ineentsimbi ezintandathu kunye noonobumba abakhulu kuphela, akukho zimpawu zokubhala.
Iingcali kwihlabathi lobugcisa begraphic zihlala zitshintsha rhoqo, ke bafuna iindlela ezintsha zokunxibelelana ngokuyilayo, ukuze ufikelele abaphulaphuli bakho, kwaye ngoncedo lokuchwetheza yeyona ndlela ichukumisayo yokufikelela kuyo.
Ayisiyiyo kuphela abayili abakule spiral yotshintsho, kodwa kunye nokuchwetheza kwaye ayiyi kuyeka kwi-digital age, ekubeni, ngeli nqanaba lembali, kukho amathuba amaninzi ophuhliso ngenxa yenkqubela phambili yezobuchwepheshe esinayo namhlanje. ngemini.
Ukuba eli nqaku alivusi nje ingqondo yakho kwiiprojekthi zakho zexesha elizayo, kodwa kunye nomnqweno wakho wokuzikhuthaza kwaye uphonononge ukuyila eyakho, ukusuka kwi-intanethi yokudala siyakukhuthaza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Iifonti ezingcono kakhulu ezincinci
Imbali yelogo yeChanel